မွေးကျွတ်နာ ခဏခဏ ပြန်ဖြစ်တတ်တဲ့ ယောင်းယောင်းတို့ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ -
မွေးကျွတ်နာ ခဏခဏ ပြန်ဖြစ်တတ်တဲ့ ယောင်းယောင်းတို့ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့
Posted on January 9, 2019 January 9, 2019 Author For Her Myanmar	Comment(0)
နည်းလမ်းလေးတွေက ခက်လည်း မခက်ဘဲ ကိုယ်ကမသိတော့ မွေးကျွတ်နာ ခဏခဏဖြစ်နေတာ…
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိတဲ့ သာမန်အမွေးတွေက ခန္ဓာကိုယ် အပြင်ဘက်ကို ဦးတည်ပြီး ထွက်တယ်ဆိုတာကတော့ လူတိုင်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်.. ဒါပေမဲ့ မွေးကျွတ်နာ ဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ အမွေးတွေက ကောက်ကွေးပြီး အရေပြားအတွင်းဘက်ကို ဦးတည်ပြီး ပေါက်တတ်ပါတယ်။ မွေးကျွတ်နာက အရေပြားကို ယားယံစေနိုင်သလို အခြေအနေ ဆိုးတဲ့အခါ အနာတွေ ဖြစ်စေပြီး ပြည်လည်း ထွက်တတ်ပါတယ် 🙁
အသားမာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်သလို ခန္ဓာကိုယ်အမွေးတွေကို ရှင်းလင်းတဲ့နေရာမှာ အရမ်းတိုလွန်းသွားရင်လည်း အရေပြားကို ရှစေပြီး မွေးကျွတ်နာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေ အနာထဲမှာ အမွေးအမျှင်တွေကို မြင်ရတာမျိုး ရှိပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင် မေးစေ့၊ ပါးနဲ့ဂုတ်ပိုးတွေမှာ ပို အဖြစ်များပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်တော့ ခြေထောက်တွေ၊ ဆီးခုံနဲ့ ချိုင်းတွေမှာ ပိုတွေ့နိုင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…
Related Article >>> စိတ်ခံစားချက်တွေက အရေပြား အလှအပကို ဘယ်လိုတွေ ထိခိုက်စေနိုင်လဲ?
ကျား/မ ဟော်မုန်းတွေ သိသိသာသာ မြင့်တက်နေသူတွေမှာ ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ယောင်းတို့ရေ။ ဖြစ်တာကတော့ လူတိုင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ အမွေးအမျှင်များပြီး အမွေးအမျှင် ကောက်ကွေးသူတွေမှာတော့ အမွေးရိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ သာမန်လူတွေထက် ပိုတွေ့ရတတ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဘာမှမလုပ်ဘဲ ဒီအတိုင်း ပျောက်သွားတတ်တာမျိုး ရှိပေမဲ့ လက်နဲ့ ကုတ်ခြစ်မိရာက တစ်ဆင့် ပိုးဝင်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပိုးဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အနာကို နည်းနည်းလှီးပြီး အထဲက ကပ်နေတဲ့ အမွေးကို ဖယ်ထုတ်ရမှာပါ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကျတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပဋိဇီဝဆေးတွေ ၊ အရောင်ကျဆေးတွေ သောက်သုံးဖို့ လိုပါတယ်။
Related Article >>> အမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်သည့် အော်တိုအင်မြူးရောဂါ (၇)မျိုး
မျက်နှာသစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ စိုစွတ်တဲ့ အဝတ်အသန့်နဲ့ စက်ဝိုင်းပုံစံ သုတ်ပေးပါ။
အမွေးမရိတ်တဲ့အခါ ဓားသွားတစ်ခုပါတဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားကို သုံးပါ။
အမွေးမရိတ်ခင် ရေနွေး ဒါမှမဟုတ် အမွေးရိတ်ခရင်မ် (Shaving Cream) သုံးပါ။
အမွေးရိတ်မယ်ဆိုရင် ဦးတည်ရာ တစ်ခုတည်းကို ရိတ်ပါ။
ဥပမာ- ညာဘက်ကို ဦးတည်ပြီး ရိတ်မယ်ဆိုရင် အမွေးတွေ ကုန်တဲ့အထိ ညာဘက်ကိုပဲ ဦးတည် ရိတ်ပါ။
ဓားသွား အနည်းငယ်သာ ပါတဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားကိုသာ သုံးပါ။
အမွေးရိတ်ပြီးတိုင်း ဓားသွားကို ရေနဲ့ သေသေချာချာ ဆေးပေးပါ။
အရေပြားကို အရမ်းဖိပြီး မရိတ်ပါနဲ့။
အမွေးရိတ်ပြီးတဲ့အခါ ရိတ်ထားတဲ့နေရာကို ရေစိုရုံ အ၀တ်အေး အသုံးပြုပြီး ခဏ အုပ်ပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် အစိုဓာတ်ပါတဲ့ လိုးရှင်း တစ်ခုခု လိမ်းပါ။
ကဲ.. မွေးကျွတ်နာ ခဏခဏ ပေါက်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ယောင်းတို့ ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ပြီး ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေလို့..
စာရေးသူ- ဒေါက်တာ အောင်ပြည့်ဖြိုးဦး (ကျန်းကျန်းမာမာ by Alinker)
Reference : Web MD
နညျးလမျးလေးတှကေ ခကျလညျး မခကျဘဲ ကိုယျကမသိတော့ မှေးကြှတျနာ ခဏခဏဖွဈနတော…
ခန်ဓာကိုယျမှာ ရှိတဲ့ သာမနျအမှေးတှကေ ခန်ဓာကိုယျ အပွငျဘကျကို ဦးတညျပွီး ထှကျတယျဆိုတာကတော့ လူတိုငျး သိပွီးသားဖွဈမှာပါနျော.. ဒါပမေဲ့ မှေးကြှတျနာ ဖွဈတဲ့အခါမှာတော့ အမှေးတှကေ ကောကျကှေးပွီး အရပွေားအတှငျးဘကျကို ဦးတညျပွီး ပေါကျတတျပါတယျ။ မှေးကြှတျနာက အရပွေားကို ယားယံစနေိုငျသလို အခွအေနေ ဆိုးတဲ့အခါ အနာတှေ ဖွဈစပွေီး ပွညျလညျး ထှကျတတျပါတယျ 🙁
အသားမာတှကွေောငျ့လညျး ဖွဈတတျသလို ခန်ဓာကိုယျအမှေးတှကေို ရှငျးလငျးတဲ့နရောမှာ အရမျးတိုလှနျးသှားရငျလညျး အရပွေားကို ရှစပွေီး မှေးကြှတျနာ ဖွဈတတျပါတယျ။
တဈခါတလေ အနာထဲမှာ အမှေးအမြှငျတှကေို မွငျရတာမြိုး ရှိပါတယျ။ အမြိုးသားတှမှောဆိုရငျ မေးစေ့၊ ပါးနဲ့ ဂုတျပိုးတှမှော ပို အဖွဈမြားပွီးတော့ အမြိုးသမီးတှမှောဆိုရငျတော့ ခွထေောကျတှေ၊ ဆီးခုံနဲ့ ခြိုငျးတှမှော ပိုတှနေို့ငျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…
Related Article >>> စိတျခံစားခကျြတှကေ အရပွေား အလှအပကို ဘယျလိုတှေ ထိခိုကျစနေိုငျလဲ?
ကြား/မ ဟျောမုနျးတှေ သိသိသာသာ မွငျ့တကျနသေူတှမှော ပိုပွီး ဖွဈနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ ယောငျးတို့ရေ။ ဖွဈတာကတော့ လူတိုငျးမှာ ဖွဈနိုငျပါတယျတဲ့။ အမှေးအမြှငျမြားပွီး အမှေးအမြှငျ ကောကျကှေးသူတှမှောတော့ အမှေးရိတျပွီးတဲ့အခြိနျမှာ သာမနျလူတှထေကျ ပိုတှရေ့တတျတယျလို့လညျး ဆိုပါတယျ။
ဘာမှမလုပျဘဲ ဒီအတိုငျး ပြောကျသှားတတျတာမြိုး ရှိပမေဲ့ လကျနဲ့ကုတျခွဈမိရာက တဈဆငျ့ ပိုးဝငျတာမြိုးလညျး ဖွဈတတျပါတယျ။ ပိုးဝငျခဲ့မယျဆိုရငျတော့ အနာကို နညျးနညျးလှီးပွီး အထဲက ကပျနတေဲ့ အမှေးကို ဖယျထုတျရမှာပါ။ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးကတြော့ သကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွီး ပဋိဇီဝဆေးတှေ ၊ အရောငျကဆြေးတှေ သောကျသုံးဖို့ လိုပါတယျ။
Related Article >>> ဘယျတော့မှ မကုတျသငျ့တဲ့ ယားယံခွငျး (၁၀)မြိုး
မကျြနှာသဈပွီးတဲ့အခါမှာ စိုစှတျတဲ့ အဝတျအသနျ့နဲ့ စကျဝိုငျးပုံစံ သုတျပေးပါ။
အမှေးမရိတျတဲ့အခါ ဓားသှားတဈခုပါတဲ့ မုတျဆိတျရိတျဓားကို သုံးပါ။
အမှေးမရိတျခငျ ရနှေေး ဒါမှမဟုတျ အမှေးရိတျခရငျမျ (Shaving Cream) သုံးပါ။
အမှေးရိတျမယျဆိုရငျ ဦးတညျရာ တဈခုတညျးကို ရိတျပါ။
ဥပမာ- ညာဘကျကို ဦးတညျပွီး ရိတျမယျဆိုရငျ အမှေးတှေ ကုနျတဲ့အထိ ညာဘကျကိုပဲ ဦးတညျ ရိတျပါ။
ဓားသှား အနညျးငယျသာ ပါတဲ့ မုတျဆိတျရိတျဓားကိုသာ သုံးပါ။
အမှေးရိတျပွီးတိုငျး ဓားသှားကို ရနေဲ့ သသေခြောခြာ ဆေးပေးပါ။
အရပွေားကို အရမျးဖိပွီး မရိတျပါနဲ့။
အမှေးရိတျပွီးတဲ့အခါ ရိတျထားတဲ့နရောကို ရစေိုရုံ အဝတျအေး အသုံးပွုပွီး ခဏ အုပျပေးပါ။ ဒါမှမဟုတျ အစိုဓာတျပါတဲ့ လိုးရှငျး တဈခုခု လိမျးပါ။
ကဲ.. မှေးကြှတျနာ ခဏခဏ ပေါကျလို့ စိတျညဈနတေဲ့ ကိုကို၊ မမ တို့ ဒီဆောငျးပါးလေး ဖတျပွီး ကွိုတငျ ကာကှယျနိုငျကွပါစလေို့..
စာရေးသူ- ဒေါကျတာ အောငျပွညျ့ဖွိုးဦး (ကနျြးကနျြးမာမာ by Alinker)
Tagged Cure, hair, Health, Ingrown, Ingrown Hair, KKMM, Prevent
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပါးလွှာဆုံးသော အမျိုးသမီး လစဉ်သုံးပစ္စည်း
Posted on January 26, 2018 January 26, 2018 Author Myat Moe
၀.၁ စင်တီမီတာပဲထူတယ်ဆိုတော့ကာ သုံးရမှာတော့ ခပ်ကြောက်ကြောက်ရယ်။ သုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့…
Fitness Health Knowledge
သိပ်လှတာလည်း အနိစ္စပါပဲ… ၀ိတ်ကို အတင်းကြီးမချပါနဲ့လို့…
Posted on August 25, 2017 Author Su Myat
ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်လေးနဲ့ လှတာကို လိုချင်ကြပေမယ့် အသည်းအသန်ကြီးဝတ်ချပစ်လို့ ပိန်ကျသွားတယ်ဆိုရင်တောင် တကယ်ရော ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်လျော်ပါ့မလား…
အိပ်ရာပေါ်က ကိစ္စများ (၄)
Posted on May 3, 2017 Author Christina Rosy
စအိုလမ်းကြောင်းတွင်း လိင်ဆက်ဆံခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချရတဲ့အခါ…
ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာ ယောင်းတို့ သွားစရာ ပွဲလေးများ